मेलम्चीले खनेका खाल्डा पुर्न नसक्नेले दिल्लीबाट काठमाडौं रेल ल्याउछु भनेर सम्मेलन गर्ने ? « Clickmandu
मेलम्चीले खनेका खाल्डा पुर्न नसक्नेले दिल्लीबाट काठमाडौं रेल ल्याउछु भनेर सम्मेलन गर्ने ?
प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७३, मंगलवार १३:२३
नेपाली समुदायबीच ‘दुईटा कुरा हुन्छ’ भन्ने किंबदन्ती खुबै लोकप्रिय छ । युद्ध मैदानको एउटा सिपाही दुईटा कुराको अन्तरद्धन्द्धमा फस्छ । युद्ध मैदानमा दुइटा कुराको सम्भाबना पहिला उसले देख्छ । ऊ मारिन पनि सक्छ र मार्न पनि सक्छ । मारिदा पनि दुइटा कुरा हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्छ । र, बिरोधी सिपाही मार्दा पनि उसले दुइटा सम्भाबना देख्छ ।
उसको दिमागमा घुसेको यी दुइटा सम्भाबनाको अन्तरद्धन्द्धले ऊ निस्कनै नसक्ने दलदलमा फस्छ । र, उसले तत्काल निर्णय गर्छ । अनि युद्ध मैदानबाट भाग्छ । युद्ध मैदानबाट भाग्दा पनि दुइटा सम्भाबना रहन्छ भन्ने उसले सोच्न सक्दैन । उसको दिमागले एउटा मात्रै सम्भबाना देखेको भाग्ने उपाय समाजले स्वीकार गर्न नसक्ने विषय हो भन्ने उसले सोच्न सक्दैन । अनि समाजले उसलाई भगौडा सिपाही भनेर जिबनभर गज्याइरहन्छ ।
यो किंबदन्ती नेपाली ब्यवहारमा पनि खुबै प्रचलनमा छ । चरित्र, अभिब्यक्ति र मुल्याङ्कनमा दोहोरो मापडण्ड राष्ट्रिय संस्कृति भएको छ । सरकारी निकायको कार्यसम्पादनको हकमा त झन् दुई स्वार्थ बाजेर होला परस्पर बिरोधी दुई कामलाईसँगै लान खोजिन्छ । एउटा निकायले आगो बाल्दै गर्दा अर्कोले आएर पानी खन्याइदिए जस्तै । सडक बिभागले सडक कालोपत्रे गर्दै गर्दा खानेपानीले पाइप बिछ्याउन भन्दै त्यही सडक खन्छ । खानेपानीको पाइप पुरिनसक्दै ढल राख्न फेरि खाल्डो खन्ने योजना कार्यान्वयन हुन थाल्छ ।
यही संस्कृतिको भद्दा र नयाँ स्वरुप अहिले राजधानीमा देखिँदैछ । राजधानीबासी मेलाम्चीको नाउँमा खनेका खाल्डाबाट उडेका धुँवाको मुस्लोबाट जोगिन ‘माक्सबादी’ भैरहँदा देशको ठूला माक्र्सबादी नेताको सरकारले ‘पूर्वाधार बिकास सम्मेलन’ नामको एउटा जमघट आयोजना गरेको छ ।
जमघटमा देश बिदेशका ठूला नेतादेखि बिज्ञसम्म भेला भएका छन् । दिल्लीदेखि कलकत्ता हुँदै काठमाडौंसम्म रेल गाडी गुडाउने बिषयमा छलफल भएको छ ।
एक एक संचार माध्यममा हौसिएर ‘अब छिट्टै मुलपानीका जनताको आँगनमा सनथ जर्यसूर्याले हानेको छक्का बल फुत्त झर्न सक्छ, अनि सचिन तेन्दुल्करले हानेको छक्का बल रङ्गशालामा खेल हेर्न गएका दर्शकले च्याप्प समाउन पाउँनेछन्’ भनेर समाचार नै प्रकाशित गरेको थियो ।
अबका १/२ दिनमा बिमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, मोनोरेल लगायत बिषयमा घनिभुत छलफल हुँदै जाला । रमाइलो कुरा के छ भने सहरको कुनै तारे होटलमा बैठक गरेर ठूला ठूला डिङ हाँके पनि तिनले फेर्ने श्वासमा पनि त्यही मेलाम्चीको नाममा खनेको खाल्डोबाट निस्केको धुलो लट्पटिएर आएको छ । हावाको बहावले ठूलो सानो भन्दैन नै ।
अहिलेको सम्मेलनलाई गिज्याउने मेलाम्चीको खाल्डो बाहेक अन्य दुई सामान्य पूर्वाधार पनि छन् । बनाउन वा मर्मत गर्न खासै खर्च, मेहेनत वा प्रबिधि नचाइने, तर सरकारी निकायको नालायकीको बिम्ब बनेर चालु सम्मेलनलाई भने कुरीकुरी गरिरहेका ।
ती हुन सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारबाट क्रमशः २ र १० किलोमिटरको दुरीमा रहेका दशरथ रङगशाला र मूलपानीको क्रिकेट मैदान । भुकम्प आएको झण्डै २ बर्ष पुगिसक्दा पनि अलिअलि चर्किएका प्याराफीट टाल्न र केही उप्किएका कुर्सीहरु टाँस्न सरकारी निकाय सक्षम भएका छैनन् । यति पनि गर्न नसक्दा राष्ट्रिय फुटबल लिग, अन्य कर्पोरेट खेलहरु र कन्र्सटहरु, जसले अर्थतन्त्रमा केही योगदान पु¥याउन सक्थे, हुन सकेका छैनन् ।
पर्यटक भन्ने बित्तीकै रुक्स्याक बोकेर हिमाल हेर्न आउने गोरे, पूर्वाधार भनेकै ठूला ठूला रेल मार्ग, बिमानस्थल आदि र उद्योग भनेकै चिम्नीबाट फुसफुस धुवाँ फाल्ने कारखाना हो भन्ने सोच कै उपज हो यो पूर्वाधार सम्मेलन ।
मूलपानीको क्रिकेट मैदानको त झन रोचक किस्सा छ । पहिलोपटक यो रङगशाला बन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदा एक एक संचार माध्यममा हौसिएर ‘अब छिट्टै मुलपानीका जनताको आँगनमा सनथ जर्यसूर्याले हानेको छक्का बल फुत्त झर्न सक्छ, अनि सचिन तेन्दुल्करले हानेको छक्का बल रङ्गशालामा खेल हेर्न गएका दर्शकले च्याप्प समाउन पाउँनेछन्’ भनेर समाचार नै प्रकाशित गरेको थियो ।
हेर्दाहेर्दै सनथ र सचिन मात्र होइन उनीहरु भन्दा पछिका पुस्ताले पनि क्रिकेटबाट सन्यास लिइसके । तर मूलपानीको रङ्गशाला बनेन । खेलाडीहरु बस्ने, लुगा फेर्ने, खाना खाने लगायत काम गर्ने पेभिलियनमा अझै कुकुरले फोहोर गरिरहेका छन् ।
यो रंगशाला समयमै बन्थ्यो भने कति अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्थे होलान ? कति ठूला खेलाडीहरु यहाँ आउँथे होलान ? अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कति चर्चा हुन्थ्यो होला ? यसले नेपालमा आउने पर्यटकहरुको संख्यामा कति बृद्धि हुन्थ्यो होला ? अनि यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति टेवा दिन्थ्यो होला ? सम्झदैं दिक्क लाग्छ ।
‘ठूला’ काम गर्नै नसक्ने, ‘साना’ कुरा गर्दै नगर्ने समस्यामा जकडिएको छ अहिलेको नेपाल ।
यसैबिच एक जना ब्यवसायीले रङ्गशाला आफैं बनाइदिने घोषणा गरे । अझ दुई भाइ गायकले त झन बिदेशमा गीत गाएर कमाएको पैसा क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सरकारलाई दिने घोषणासमेत गरे ।
वास्तवमा माथिका दुई रङ्गशाला बनाउन र मर्मत गर्न धेरै पैसा लाग्ने होइन । केही करोड खर्च गरेर यी दुई रङ्गशाला बनाउन समेत नसक्ने दरिद्र पनि होइन नेपाल सरकार । तर, सोच भने धरै नै साँघुरो भएकै हो । ‘ठूला’ काम गर्नै नसक्ने, ‘साना’ कुरा गर्दै नगर्ने समस्यामा जकडिएको छ अहिलेको नेपाल ।
पर्यटक भन्ने बित्तीकै रुक्स्याक बोकेर हिमाल हेर्न आउने गोरे, पूर्वाधार भनेकै ठूला ठूला रेल मार्ग, बिमानस्थल आदि र उद्योग भनेकै चिम्नीबाट फुसफुस धुवाँ फाल्ने कारखाना हो भन्ने सोच कै उपज हो यो पूर्वाधार सम्मेलन । दिल्लीबाट काठमाण्डौं आउने रेलको कुरा गर्नुको साटो साना साना काम गरे अर्थतन्त्रले फड्को माथ्र्यो ।
साना साना खर्चमा बनाइने गल्फ कोर्स, उच्च हिमाली भेगमा बनाउन सकिने टेनिस कोर्ट, माथी उल्लेखित रङ्गशाला जस्ता सानो खर्चमा बन्ने पूर्वाधारले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ ।
लेखक कर्ण शाक्यले कतै लेखेका छन् ‘टेनिस खेलाडीहरु ठूला प्रतियोगिता खेल्नु अघि धेरै शारिरिक अभ्यास पर्ने चुनौतीपूर्ण भुगोलमा अभ्यास गर्न रुचाउँछन् । उनीहरुका लगि नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्र अभ्यासका लागि उपयुक्त क्षेत्र हुन्’ भनेर ।
रोजर फेडेरर र राफेल नाडाल अभ्यास गर्न नेपाल आइदिए भने नेपालको चर्चा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा कस्तो होला ? नेपालको खेलकुद पर्यटन कहाँ पुग्ला ? यसको लागि ठूलो पूर्वाधार वा लगानी चाहिदैनथ्यो ।
इङ्गलिस प्रिमियर लिगले बेलायतको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान गरेको छ भन्ने समाचार केही समय अगाडि क्लिकमाण्डू डट कममा नै प्रकाशित प्रसारित छ । त्यस्तै, धनीहरुको खेल भनेर चिनिने खेल गल्फले पनि देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गल्फको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान १ खर्ब ७७ अर्ब डलर बराबर छ । गल्फ क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुको कुल तलब अमेरिकामा ५५.६ अर्ब डलर छ । कुल २० लाखको हाराहारी मानिस यस क्षेत्रमा काम गर्छन् । गल्फ उद्योगबाट हुने यातायात खर्च मात्र २०.६ अर्ब डलर बराबर छ । यसबाट यातायात ब्यवसायी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । गल्फसँग सम्बन्धित मिडिया उद्योग (किताब, म्यागजिन, डिभिडि आदि) ले मात्र करीब ५३ करोड डलर बराबरको ब्यवसाय प्राप्त गरेका छन् ।
बेलायती अर्थतन्त्रमा पनि गल्फको ठूलो योगदान छ । पूँजी लगानी, बिभिन्न टुर्नामेन्ट र कार्यक्रमहरु, गल्फसँग सम्बन्धित जग्गा जमीनको कारोबार, पर्यटन, गल्फका सामाग्रीको किनबेच, रोजगारी, गल्फ खेल्दा लाग्ने खर्च आदिले बेलायती अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो योगदान पु¥याएका छन् । यी सबैबाट सन् २०१२ मा मात्र बेलायतको अर्थतन्त्रमा ३३ अर्ब पाउण्ड बराबरको योगदान पुगेको थियो ।
गल्फलाई त एउटा उदाहरणको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिएको हो । नेपाल भौगोलिक रुपमा निकै सुन्दर र उच्च हिमाली श्रृंखला र पहाडहरु समेत भएका हुनाले धेरै साहसी खेलकुदहरुको प्रचुर संभावना छ । बन्जी जम्प र राफ्टीङ सफल उदाहरण हुन् ।
तर, यसका लागि सोचमा थोरै परिवर्तनको खाँचो छ । साना साना संभावनाको खोजी गर्नु जरुरी छ । खाल्डा नपुर्ने, रङ्गशाला अलपत्र पार्ने अनि पूर्वाधार सम्मेलन गरि रेल र बिमास्थलको कुरा गरेर कहिँ पुँगिदैन । माथि उल्लेख गरिएको किंबदन्तीमा भागेको सिपाहीलाई समाजले जिबनभर गिज्याए जस्तै हाम्रो बिकासले हामीलाई नै गिज्याउने छ ।
वाणिज्य बैंकबाट बाहिरियो १३ अर्ब निक्षेप
काठमाडौं । माघको पहिलो सातामै वाणिज्य बैंकबाट १३ अर्ब निक्षेप घटेको छ । एक सातामा
नेपालमा भ्रष्टचार उस्तै, सयमा ३३ अंक मात्रै
काठमाडौं । नेपालमा निरन्तर सुशासनको बहस भए हुने गरे पनि भ्रष्टचार न्यूनिकरणमा भने कुनै पनि
प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हुने
काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन हुने भएको छ ।
साढे ३७ करोड बढी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने ४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले साढे ३७ करोड बढी विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने ४ जना
सेयर बजारमा गिरावट आउँदा कसले कमाए, कसले गुमाए ?
काठमाडौं । सेयर बजारमा सामान्य गिरावट आएको छ । कारोबार रकम पनि घटेको छ ।
एनआइसी एशियाको एग्रेसनमा राष्ट्र बैंकले ब्रेक लगायो, भन्यो- अब व्यवसाय नबढाउनू
एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंक कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा